गुन्द्रुक हैन मासु | आरोह अवरोह.....
गुन्द्रुक हैन मासु
Posted on Tuesday, October 12, 2010 No Comments
बिदेशीएको पनि झंडै चार बर्षपो हुन लागिसकेछ, कुनै पत्तो नपाई यो ब्यस्त जापानमा । सायद यो बिदेशी ब्यस्तताले गर्दाहोला । अनि दशैं मनाउन नपाएको र आमाको हातबाट टिका र आशीष नथापेको पनि ४ पटक हुन्छ यो पालि, त्यसैले यो पटकको दशैं मा मेरी आमा मलाई सम्झीरहनुभएको होला । दुख लाग्छ मलाई यो बिदेशी भूमिमा आईएकोमा । किनकी, न यहाँ कुनै आफ्नो चाड मनाउन पाइन्छ? न त कुनै रमाइलो गर्न पाइन्छ? चाहे दशैं आओस चाहे तिहार? कुनै अर्थ हुदैन यहाँ । त्यसैले जब नेपाली चाड आउँछ, नेपालको सम्झनाले पिरोलेर बिरक्त लागेर नेपाल फर्कुं फर्कुं लाग्ने बनाईदिन्छ ।
त्यसैले आज त्यहि परदेशीएको पीडामा दशैं सम्बन्धि गजल लेखेकोछु ।
दशैंमा घर फर्की आईने पो होकी होईन?
गुन्द्रुक हैन मासु खाईने पो होकी होईन?
युद्ध बल्ल रोकेपछि आमाको हात बाट
रातोटिका लगाउन पाईने पो होकी होईन?
फाटिएर लुगासबै लाउन मिल्ने एकसरो
नयाँ लुगा "आमा" लाईने पो होकी होईन?
वर्ष भरिका दु:ख विर्सेर परिवार सबले
हाँसी खुसि गीत गाईने पो होकी होईन?
चुहिएका झुपडी त्यो दशैंको यो मौकामा
जेनतेन गरि छानो छाईने पो होकी होईन?
आशिष थाप्न सबको अनि पैसा बटुल्नलाई
आफन्तको घर घर धाईने पो होकी होईन?
बिजया दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभ कामना !